Miteny “Gineana” Va ianao ? Na Ireo Teny 10 Voalohany Tsy Mitovy Dika Ao Ginea Sy Any An-kafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2016 5:28 GMT
Ilay bilaogera Gineana, Alimou Sow, nahazo ny loka 2013 avy amin'ny daholobe, tao anatin'ny sokajy Bilaogy Tsara indrindra amin'ny fiteny Frantsay tamin'ny 2013, ho an'ny bilaoginy Ma Guinée plurielle, no manolotra ao anatin'ny lahatsorany farany “Miteny “Gineana” Va ianao ? ireo teny sy fomba fiteny 10 voalohany amin'ny teny frantsay manaraka ny loko ao an-toerana, izay ireto ny sasantsasany aminy :
… toy ny any rehetra any izay ny teny frantsay, tenim-pirenena vahiny, no midongy toerana ho teny ofisialy manindry ireo fiteny eo an-toerana, dia nahazo ny anjara “tics” (fahazarandratsy) ho azy amin'ny resaka teny ihany koa ry zareo Gineana, arakaraky ny fifandimbiasan'ireo andian-taranaka, tamin'ny fomba fiteniny. Miteny ho azy ny vokatra. Teny tsotra niafara tamin'ny fanànana dikany mety handiso hevitra, hanafintohina na hampitsiky ireo mpila ravinahitra sambany mba tonga voalohany sy mampidi-dresaka.ao Conakry.
Manaraka avy eo ny lisitr'ireo teny 10 mahafinaritra ahitàna ireo voambolana fampiasa andavanandron'ireo Gineana, izay ireto ny sasany :
Chose (Zavatra) : Ilay teny manafintohina ny vahiny. Eny ambavan'ny Gineana iray ny fanànana eo imolony ny teny hoe “chose” dia midika hoe “truc” na “machin” (Fanamarihan'ny mpandika: ho an'ny mpamaky amin'ny teny Malagasy, dia azo adika ho ‘zavatra’ daholo izy roa ireo, na indraindray, atao koa hoe ‘fika’). Ny olona iray rehefa very tadidy ka miezaka mitadidy zavatra iray na olona iray, dia ny “chose” no ampiasaina. Ireo tena sosotra amin'izany dia mampilahatra azy ho toy ny perla atsofoka amin'ny alàlan'ny famelezana totohondry ny loha : « euh … chose, chose » Pan ! « euh … chose-là » tchipp. Ireo aza dia tonga hatramin'ny fahasahiana namorona matoanteny mihitsy hoe « choser » izay tsy midika na inona na inona velively !
L’autre-là (ilay iray iry) : Dika iray hafa ho an'ny « chose » io, anondroana anaran'olona iray. Ny olona iray izay adino ny anarany na ny fanampin'anarany dia lasa « l’autre-là ». Fa ny manana fanomezam-pahasoavana manokana handrangitra ireo mpila ravinahitra sasany izay afaka mampitovy azy io amin'ny fanaovana tsinontsinona, ary ny ratsy lavitra noho izany aza dia ny fampidinana hitovy amin-javatra. Nefa tsy izany mihitsy. Fa tsy fahitàna voambolana fotsiny izao ilay izy, izay fahabangàna ezahana fenoina amin'ny fandikàna mivantana ny hevitry ny tenindreniny ho amin'ny teny frantsay. Sorohy araka izany ny manome tsiny ny “l’autre” (hafa).
C’est mesquin : Ao anaty rakibolana frantsay, ny hoe “mesquin” dia anondroana ireo tia tena sy tsy mahay mizara. Ao Ginea indray dia mazàna ilazàna asa iray izay mitaky fifantohantsaina betsaka na fotoana betsaka. Izany hoe asa manahirana, na saropady mihitsy. Lazaolana matematika iray : « c’est mesquin ». Tabilao mifampidimpiditra ao anaty Excel : c’est mesquin ». Mba hanondroana ny maha-saropady ny asa iray, dia taritina mihitsy ny vaninteny farany: « c’est mesquiiinnn » ! (Fanamarihan'ny mpandika: ho an'ny Malagasy, raha alaina amin'ny heviny Gineana, dia azo adika hoe “Henjana izany”)
En cas de cas : Ity fiteny tena an'ny Gineana manokana ity dia midika amin'ny teny frantsay hoe « le cas échéant » (raha ilaina) , izany hoe raha izay no mitranga. Miala tsiny aho amin'ny fanatsotsorana fa tsy maintsy marihana tsara koa hoe ao anatin'ny fahatakaran'ny maro amin'ireo mpiray tanindrazana amiko, ny fomba fiteny hoe « le cas échéant » dia midika « Raha tsy izany » ! Izany rehetra izany ve tsy hitanareo hoe c'est mesquin (manahirana) ?
Moins un/ moins cinq (latsaka iray/latsaka dimy): Aty aminay, ampiasaina ireo fomba fiteny roa ireo hanondroana ny tena mety hitrangan'ny zavatra, na hetsika iray. Izy ireo no dikan'ny hoe « il a fallu de peu » (divi-janahary), « in extrémis », etc. Mpilalao iray tsy nahatafiditra daka ‘penalty’, dia moins un no tsy nahatafidirany azy. Fiarabe iray saiky nahahitsaka mpandeha an-tongotra, dia moins cinq no tsy nahafatesan'ilay fiarabe azy. Tsy fantatro na noho ireo fiteny miiba roa ireo manakaiky ny aotra no ampiasàna azy ireo. Izany eo ihany, fa nahoana isika no tsy mampiasa ny hoe moins trois na moins sept, ohatra… ?
C’est doux (malefaka): Ho entina mankafy ny tsiron-tsakafo iray, ny Frantsay dia miteny hoe : « c’est bon » ! Aty Ginea, hoy izahay hoe « c’est doux ». Doux / Malefaka ny vary, malefaka ny saosy, sns… Fony nanao fizàrana asa tao amin'ny gazety iray tao Parisy aho tamin'ny faran'ny 2011, nampivanitika ireo mpiara-mizatra asa tamiko io fomba fiteny io, izay noiraisin-dry zareo ho azy koa taty aoriana mba hikororohany ahy tsindraindray.